Somalia oo jaga muhiim ah ka heshay Qaramada Midoobey. – iftiin fm
Somalia oo jaga muhiim ah ka heshay Qaramada Midoobey.
Safiirka Somalia ee Qaramada Midoobey Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa loo doortay kursiga madaxweyne ku xigeenka golaha guud ee Qaramada Midoobey, sida goor dhow uu shaaciyey howl-galka QM ee Soomaaliya.
Bilaawgii bishan Volkan Bozkır oo u dhashay dalka Turkiga ayaa loo doortay Madaxweynaha Golaha guud ee Qaramada Midoobey, iyadoo maanta uu ku xigeenkiisa noqday Safiirka Somalia Qaramada Midoobey Abuukar Baalle.
Somalia oo kursigan loo doortay xilligan lagu guda jiro kalfadhiga 75-aad ee golaha ayaa ku sii fadhi doonta laba sano, waana markii seddaxaad ee xilkan ay ka qabato Qaramada Midoobey, waana markii ugu horeysay ee loo doortay 33-sano kadib.
← 120 Kiis oo Cudurka Corona virus-ka ah oo Maanta Kenya laga helay
WHO: Covid-19 wuu soo labo kacleyn doona. →